Faa’iidooyinka Mucjisada Ah Ee Qofku Wakhtiga Uu Sii Seexanayo Ka Heli Karo Dhagaysiga Qur’aanka – Tusmoonline.com
Faa’iidooyinka Mucjisada Ah Ee Qofku Wakhtiga Uu Sii Seexanayo Ka Heli Karo Dhagaysiga Qur’aanka
Dhacdooyinka Wararka	January 12, 2017	284	Like
Qur’aanka Kariimka ahi waa Kitaabkii iyo Qawlkii ALLAH (SWT), Qur’aanku waa Mucjiso Ilaahay SWT ku galladay Nabigeennii Muxammed NNKHA oo uu gaar u yeelay iyada oo Nabi kasta Ilaahay Mucjiso siin jiray marka uu soo dirayo, Taasoo Ilaahay SWT Mucjisadii Nabi Maxamed lasoo raaciyey ka dhigay Qur’aanka Kariimka ahi. Waa u Hanuun Ummadda Muslimiinta ah isaga oo ah hagaha kugu ridaya jidka toosan ee xaqa ah, waana Kitaabkii ugu dambeeyey ee Ilaahay SWT dunida u soo dejiyo oo aan lahayn inxiraaf sida lagu sameeyey kutubtii dhiggiisa ahayd ee Injiil, Tawtaar iyo Zabuurba.
Akhriska iyo dhagaysiga Qur’aanka Kariimka ahi waxa uu umadda u leeyahay faa’iidooyin ballaadhan oo aynaan qormo iyo laba toona kaga gayoon Karin iyada oo Ilaahay SWT qur’aankiisa kus heegay Caafimaad. Qur’aanku waa Mucjiso Ilaahay SWT koonkan keenay oo la doonayo in addoomuhu ku dabbaqaan noloshooda iyo hadba waayahooda iyada oo dhagaysiga iyo akhriskiisa laga helo faa’iidooyin aad u ballaadhan. Qormadan kooban waxa aan si gaar ah ugu eegi doonaa faa’iidooyinka ku lammaan ee qofku ka heli karo dhagaysiga Qur’aanka Kariimka ah gaar ahaan marka uu furaashkiisa tago ee uu habeenkii sii seexanayo iyada oo culimadu aad u dhiirri geliyeen in qofku marka laga yimaad faa’iidada akhriskiisa sidoo kale la ammaanay dhagaysigiisa.
Qaar Ka Mida Faa’iidooyinka Dhagaysiga Qur’aanka Ee Hurdada Ka Hor:
– In Qofku noqdo mid wax soo saar iyo hal abuur leh
– Ka Hor tag iyo Daawo uu qofka uga noqdo xanuuno aad u tiro badan oo isugu jira kuwo nafsi ah iyo kuwo jidheedba. Waxa la ogaaday in xataa dhagaysiga qur’aanku hurdada ka hor uu ka hor tago xanuuno ay ka mid yihiin lafo-xanuunka, jidh xanuunka, Daalka iyo cudurrada wakhtiga ah sida Kansarka.
– Waxa uu door weyn ka qaataa edbinta iyo toosinta nafta iyo ku soo dabbaalidda dariiqa toosan
– Waxa uu kordhiyaa kalsoonida qofku isku qabo ama uu noloshiisa ku qabo
– Waxa uu qofka ku beeraa qanaacad iyo in uu ku kalsoonaado waxa Alle SWT u qaddaray ee u qoray
– Waxa uu xoojiyaa xidhiidhka ka dhaxeeya qofka Akhriska ama dhagaysta iyo Rabbigii Abuuray iyo waliba sidoo kale xidhiidhka uu dadka la leeyahay.
– Waxa uu keenaa raaxo nafsi ah (Deganaansho)
– Waxa uu kaxeeyaa werwerka iyo cidhiidhiga nafsaaniga ah
– Waxa uu yareeyaa daalka maskaxda ee ay keenaan shaqooyinka badan iyo xaaladaha wakhtigan casriga ahi wataan ee daalka maskaxda kugu keena.
– Waxa uu dhammaan suuliyaa oo qofka ka kaxeeyaa walaaca soo noqnoqda
– Waxa uu kaa kaxeeyaa cabsida iyo ku dhiirrasho la’aanta
– Waxa uu qofka ka ilaaliyaa waswaaska iyo farriimaha shaydaanku qalbigiisa u soo diro
– Waxa uu kobciyaa in qofku caqligiisa kantaroolo oo xukumo si gaar ahna u kaantaroolo hannaanka uu uga fal-celiyo arrimaha la soo dersa.
– Waxa uu qofka ka taageeraa ku dhiirrashada go’aan qaadashada wanaagsan ee nolosheena saamaynta ku yeesha
– Waxa uu xoojiyaa awoodda qofnimo gaar ahaan awood uu qofku kaga gudbi karo xaaladaha adag iyo duruufaha nololeed ee qallafsan ee waayuhu wato
– Waxa uu u furaa hadalka iyo aftahamada
– Waxa uu qofka ka dhigaa mid hadalkiisa la fahmi karo oo carrab furnaan leh
– ugu dambayn Hanuun iyo toosnaan.